हाम्रा धेरै जसो घरहरूमा फ्रिजर छ , जो काम गर्नेहरूको लागि धेरै उपयोगी छ र ताजा उत्पादन किन्न नसक्दा उनीहरूले चाहानुहुन्छ। फ्रिजरका लागि धन्यबाद, तिनीहरूले तिनीहरूलाई स्थिर किन्दछन्, वा उनीहरूलाई उपभोग नगरेसम्म भण्डार गर्न ताजा वस्तुहरू स्थिर गर्दछन्। तर होशियार! त्यहाँ केहि खानाहरू छन् जुन स्थिर गर्नु हुँदैन । यो हाम्रो चयन हो।
पानी युक्त फल र तरकारीहरू
सामान्यतया फलहरू जस्तै नाशपाती, सुन्तला, इत्यादिमा पानीको उच्च प्रतिशत हुन्छ। यो सोच्न तार्किक छ कि, जब त्यो पानी स्थिर हुन्छ, यसले खानाको फाइबर बिच्छेद गर्दछ। र यदि हामी परीक्षण गर्छौं, हामी हेर्नेछौं कि कसरी दृढ हुनुको सट्टा फलहरू नरम र टाँसिनेछ। साथै केही तरकारीहरू , जस्तै अजवाइन, काकडी, वा टमाटर, जो पछि कच्चा खाइन्छ र धेरै रस हुन्छ, नरम रहन्छ, एक अप्रिय देखावट र धेरै हराएको भिटामिनको साथ। र यो यो हो कि उनीहरूले रहेको तरल पदार्थले उनीहरूको कम्पन गर्ने फाइबरहरूको धेरै अणुहरू नष्ट गर्दछ, र हामी तीनिहरू ताजा हुँदा हामी रमाउँछौं।
यदि हामी दूध राख्न चाहन्छौं भने हामी यसलाई स्थिर गर्न सक्दैनौं। यो गांठले भरिने छ जुन डिफ्रस्टिंग पछि धेरै अप्रिय हुन्छ र यसले यसको स्वादमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्दछ - यो पानी जस्तै छ - र यसका भिटामिनहरू र पौष्टिक गुणहरू।
यदि हामीले दही फ्रिज गर्‍यौं भने हामी देख्दछौं कि यो पहिले भन्दा धेरै पानी भएको छ, र यसको टच र स्वाद अब त्यति छैन। उस्तै स्प्रेडहरूको लागि जान्छ, जसले स्वाद र स्थिरता पनि गुमाउँछ।
कडा , पग्लिएका चीजहरू एकदम भंगुर र फूलेको छ। मूल जस्तो केहि छैन। केवल 40०% वा बढी बोसो बोक्नेहरूले राम्रो प्रतिरोध गर्दछन्, यद्यपि तिनीहरूलाई पहिले नै काट्नु राम्रो हुन्छ, वा कम्तिमा भागहरूमा। नरम चीजका लागि उनीहरूले टेक्सचर र क्रीमेन्सी गुमाउँदछ जुन हामीलाई धेरै मनपर्दछ, र हल्का चीज पकाएको स्वादको सट्टा प्लास्टिक जस्तो देखिन्छ।
क्रीम वा क्रीम संग Tarts
कुनै तरिका मा तिनीहरूलाई स्थिर गर्न कोशिस गर्नुहोस्। केक - आटा - घृणित हुनेछ, कुल्चिनेछ र रमाईलो हुनेछैन। क्रीमले भत्काउन पनि सक्छ र केही पनी इच्छा ब्याक्टेरिया उत्पन्न गर्न सक्दछ, जब पग्लिन्छ।
सलाद र हरियो पातदार तरकारीहरु
यदि हामी सलादमा ताजा खाने लेटस वा अन्य तरकारीहरू बारे कुरा गर्छौं भने, फ्रीजरको बारेमा कुरा नगरौं। तिनीहरूलाई स्थिर गर्दै, तिनीहरू विल्ट हुनेछन् र नरम हुनेछन्। थप रूपमा, उनीहरू आफ्नो स्वाद र आफ्नो रंग पनि गुमाउँछन्। अफसोस!
तपाईं पूर्ण अण्डा राख्ने सोच्नुहुन्न, शेलमा, फ्रिजरमा। यसमा रहेको तरलको विस्तार हुन्छ, र अण्डा भाँच्दछ। जे होस्, यिनीहरूलाई स्मूदीहरू वा केवल जर्दी फ्रिज गर्न सम्भव छ। यदि तपाईंलाई यो कसरी छुट्टाउने बारे थाहा छैन भने, यहाँ सब भन्दा अचम्मको कुकुर चालको शीर्ष छ ।
आलुको पनि आफ्नो पल्पमा धेरै पानी हुन्छ। यो पानी क्रिस्टल बनाउँछ जब स्थिर, र फाइबर ब्रेक। थप रूपमा, यदि तपाईंले यसलाई स्थिर गर्नुभयो भने स्टार्च फुटिन्छ। यदि यो पर्याप्त छैन भने, एक स्थिर आलु कालो हुन्छ - अक्सिडेशनको परिणामको रूपमा - र केही कुरा स्वादिष्ट हुँदैन। तिनीहरूलाई पकाउन राम्रो हुन्छ र म्यास वा फ्राई गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई वास्तवमै तिनीहरूलाई स्थिर गर्न आवश्यक छ, यद्यपि यो कुनै ठूलो कुरा त होइन। सुख्खा र शान्त ठाउँमा राख्नु राम्रो।
सॉस खतरा हो, विशेष गरी यदि तिनीहरूले अण्डाहरू समावेश गर्दछ। याद गर्नुहोस् कि अण्डो ब्याक्टेरिया जब पग्लिन्छ तब गुणा हुन्छ, त्यसैले सॉस पनि कमजोर अवस्थामा हुन सक्छ। थप रूपमा, तरलको ठोस भाग अलग गरिएको थियो। पास्ता सॉसको लागि, जसमा दूध वा तरल क्रीम समावेश हुन्छ, उही। राम्रो रोक्नुहोस्।
यद्यपि त्यहाँ पहिले नै काटिएका जडिबुटीहरू झोलामा स्थिर गर्नेहरू छन्, यद्यपि यो धुनु पर्छ कि राम्रोसँग सुकाउनु पर्छ यदि तपाईं तिनीहरूलाई चार्ट वा पालक जस्तो कालो र टाँसिएको चाहनुहुन्न भने। केही व्यक्तिले तिनीहरूलाई बाल्टिनमा फ्रिज गर्ने चाल प्रयोग गर्दछ, सानो भागमा अलि तेलमा डुबाइन्छ। हामीले इमान्दार हुन को लागी प्रयास गरेका छैनौं।
उमालेको पास्ता, मसला गरिएको वा छैन
पास्ता अल डेन्टेको प्लेटको कल्पना गर्नुहोस् ... यसको चटनीको साथ। हम्म .... अब तपाईंले यसलाई फ्रिजरमा राख्नुहुनेछ र तपाईंसँग धेरै नरम र अप्रमाणित पास्ता हुनेछ, यो उत्तेजक तथ्यका साथ कि यदि सॉस दुध वा अण्डासँग थियो भने, यो खराब अवस्थामा हुन सक्छ। निष्कर्ष: हामी पास्ता स्थिर गर्दैनौं।
पग्लिएको खाद्य पदार्थ, कहिल्यै पनि!
सबै खाद्य पदार्थ एक सानो जीवाणु सामग्री बोक्छ। वास्तवमा पाचनका लागि हाम्रो आंतहरूलाई ती लाभदायक ब्याक्टेरियाहरू चाहिन्छ। तर हाय! कहिले पनि होइन, तर कहिले पनि, पग्लिएको खाना तपाईंलाई रिजेल गर्नुहोस्। ब्याक्टेरियाहरू यस्तो गुणा हुनेछ कि खानाले हामीलाई हानि गर्न सक्दछ।
यो फ्रिजिंग पछाडि नराम्रो हुने खाद्यहरूको छनौट हो, दुवैको उनीहरूको उपस्थिति र उनीहरूको पौष्टिक र स्वस्थ गुणहरूका लागि। यो वेबमा कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्दै "जादू सूत्रहरू" फेला पार्नु सामान्य छ। हामी, बस मामला मा, अब सम्म भन्न जारी हुनेछ।